धिकांशलाई आफ्नो तौल ठिकै छ भन्ने लाग्छ । मेरो तौल ठिक छ भन्ने लाग्ने व्यक्तिको तौल भने वास्तवमा ‘ओभर तौल क्याटोगोरी’मा पर्छ । अर्थात त्यस्ता व्यक्रिको तौल आवश्यक भन्दा १० देखि १५ किलोसमम बढी हुनसक्छ ।
स्वास्थ्य सचेतनाले फिट छु : धनबहादुर बुढा
नरिवल पानीको सेवनः कति लाभदायक ?
हरीयो खोसार्नी खानुको फाईदा
आनो आए के गर्ने ?
विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा र्‍याली र शिविर
ओस्टियोपोरोसिस अर्थात हड्डी कमजोर हुने कारण र बँच्ने उपाय